दलान नेपाल : अर्को गल्ती तिर लम्कदै मधेशी नेतृत्वहरु
अर्को गल्ती तिर लम्कदै मधेशी नेतृत्वहरु
at 11:58 PM Posted by Dalan
गएको सातामा दुई पटक एमाओवादी र मधेशी नेतृत्वहरु बिच गठबन्धन बनाउने गरी बैठक भएको समाचारहरु आएका छन । शनिवार भएको बैठकपछि त कतिपय मधेशी नेताहरु चाडै डकुमेन्टेसन गरी गठबन्धनलाई व्युताउन लागेको समेत बताए । मधेशी नेतृत्वहरु किन अहिले फेरी एमाओवादीसंग गठबन्धन बनाउन लागेका हुन । यसको उत्तर आफैमा अनुत्तरित छन । कतिपय संघीयतावादी भएकाले एमाओवादी र मधेशीको गठबन्धन भएमा त्यसले संविधानसभामा थप उर्जा मिल्ने बताउने गरेका छन । तर संविधानसभामा गणितीय खेल शुरु हुने वितिकै यी दुई शक्ति एक ठाउमा उभिदैमा केही फरक पर्ने सम्भावना छैन । त्यसो भए किन मधेशी नेतृत्वहरु एमाओवादीहरु संग घुलमिल गर्न थालेका हुन ।
एउटा तितो यर्थातमा भखैरै मधेश राजनिती गुज्रेको छ । विगतको पहिलो संविधानसभाको पुछारतिर एमाओवादी संग मधेशी मोर्चाले गरेको गठबन्धन कति हानिकारक सावित भएको कुरालाई मधेशी नेतृत्वहरु आकंल गरेका छ कि छैन ?
मधेशको मुद्धाको सवालमा एमाओवादी कांग्रेस, एमाले भन्द्या के भिन्न छ, त्यसको जवाफ मधेशी नेतृत्वहरु दिन सक्ने अवस्था छ ? वरु यसले मधेशी पार्टीको क्षयीकरण वाहेक अरु केही गर्न सक्दैन । दोस्रो संविधानसभाको क्रममा सिरहामा मधेशी र एमाओवादी गठबन्धनको वारेमा यो आवाज वडो गम्भिरतापुर्वक त्याहाका केही वुद्धजिवीहरुले उठाएका थिए । हामी किन मधेशी पार्टीहरुलाई भोट दिन्छौं, जव हाम्रा नेताहरु नै भन्छन कि मधेश मुद्धाप्रति एमाओवादी ठिक छ, त्यसो भए हामी एमाओवादीलाई नै भोट हाल्छौ नि, किन मधेशी पार्टीहरु लाई । भलही त्यो भोट यसपाली एमाओवादी गएको अनुभुती त भएन पछि । एमाओवादी संग विगतमा गठबन्धन भएकै कारण मधेशी पार्टीहरुले आज हामी ले यो यो उपल्ब्धी गर्यो भनेर भन्न सक्छन ? आखिर गठबन्धनमै भएकै बेलामा मधेशमा पांच प्रदेश बनाउने सहमती भएन । जुन मधेशी जनतामा सडकमा आएका कारण लागु हुन सकेन । त्यसपछि एमाओवादी भित्रको मधेश निती आफैमा विवदास्पद छ । त्यसकै कारण त्याहा मातृका यादव देखि जयकृष्ण गोईत सम्मका नेताहरु अटन नसकेर पलायन भएका हुन ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको एमाओवादीले डाकेको बैठकमा विजय गच्छदार सहभागी हुन इन्कार गरेका थिए भने सहभागी भएर पनि महन्थ ठाकुरले एमाओवादीसंग गठबन्धन नबन्ने बताएका थिए । अहिले आएर एकाएक विजय गच्छदार देखि महन्थ ठाकुर हुदै उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो सबै सहभागी भईरहेको समाचारहरु आउने गर्छ । के साच्चिकै यी नेताहरु एमाओवादीसंग गठबन्धन बनाउन लागेकै हुन । यदी हो भने यी मधेशी नेतृत्वहरुको अर्को राजनिती महाभुल हुदैछ । जसले यीनीहरुलाइ सिध्याउने वाहेक अरु केही गर्दैन ।